၉၀% အထိလျှော့ဈေးများနှင့် Shop.com.mm ၏ Fashion Sales
၉၀%အထိလျှော့ဈေးတွေနဲ့အတူ Shop.com.mmရဲ့ Fashion Sales 2017ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီး စတင်နေပါပြီ….0242
The KaungHtet September 1, 2017 7:54 am September 1, 2017
ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေနဲ့ အလှကြိုက်တဲ့ပျိုမေတို့အတွက် စက်တင်ဘာလက ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေမှာ အမှန်ပါပဲနော်…Shop.com.mm က customer တွေအတွက် အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ အမြဲကြိုးစားဖန်တီးပေးလျက်ရှိတဲ့ Online Shopping တစ်ခုပါ။ အခုဆိုရင် Shop.com.mm က ၂၀၁၇ခုနှစ်ရဲ့ ဖက်ရှင်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကို အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေ၊ အံ့အားသင့်စရာလျှော့ဈေးတွေနဲ့အတူ ယူဆောင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Fashion Sales ကို ၁ရက်နေ့ကနေ ၈ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Branded ပစ္စည်းတွေ၊ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းများစွာကို ၉၀% အထိလျှော့ဈေးတွေနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာပါ…
အခုဆိုရင် လျှော့ဈေးတွေ၊ ပစ္စည်းတွေအားလုံးက ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ ရောက်ရှိလို့နေပါပြီ…ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေအတွက် ထိပ်တန်းဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ Timberland, Kipling, John Henry, Puma, ERKE, Skechers, Micheal Kors, GUESS, Hangten, Bata, UNT စတဲ့ brand တွေ၊ beautiholic လေးတွေအတွက် Make Up Store , Revlon , Loreal , Garnier, OFRA, Canmake, Catrice, Cathy Doll စတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်များစွာကို တစ်နေရာထဲမှာ အထူးလျှော့ဈေးတွေနဲ့ ဝယ်ယူပြီဖြစ်ပါတယ်။ သင့်စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများစွာကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးမို့ လက်လွတ်မခံသင့်ဘူးနော်…
Surprise !!! ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်၊ accessories တွေကနေစလို့ မိတ်ကပ်၊ နှုတ်ခမ်းနီ၊ skincare စတဲ့ သင့်ကို စတိုင်လ်ကျလှပသွားစေမယ့် ပစ္စည်းလေးတွေကို အထူးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ https://goo.gl/Mzwpgf ဒီလင့်ခ်လေးမှာ ဝင်ကြည့်လိုက်နော်…ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီး အော်ဒါတင်လိုက်တာနဲ့ သင့်စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းတွေကို အိမ်အရောက်ပို့ပေးမှာဖြစ်လို့…ကဲ…ဘာလိုသေးလဲ ??? 🙂
Previous ArticleBuy now or cry later? Shop’s Fashion Sales 2017 with up to 90% DiscountNext ArticleMust-have Beauty Booster for Healthy Skin
Your Complete Guide to BecomeaSeller on SHOP